सुन किन्दै हुनुहुन्छ ? आजको बजार भाउ हेरेर जानुहोस् Canada Nepal
सुन किन्दै हुनुहुन्छ ? आजको बजार भाउ हेरेर जानुहोस्
काठमाडौं । माघमा सुनको मूल्यले तोलामा साढे ७६ हजारसम्मको रेकर्ड राख्यो । असार महिनायता मात्रै सुनको भाउ तीव्र ढंगले बढ्दै गइरहेको छ । सातामा हरेक दिनजसो भाउ बढिरहेको हुन्छ ।
माघ र फागुन महिना विवाहको महिना भएकाले पनि यस अवधिमा सुनको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको हुन्छ । त्यसैले सुन किन्न जानुअघि भाउ थाहा पाएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।
साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । बिहीबार ७६ हजारमा कारोबार भएको छापावाला सुन शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
तेजावी सुन प्रतितोला ७५ हजार ७ सयमै कारोबार भइरहेको छ । चाँदी पनि स्थिर रहेर प्रतितोला ८ ८० रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
फाल्गुण २, २०७६ शुक्रवार ०५:३६:०० बजे : प्रकाशित